मंसिर २३, २०७५ डा. ललित कुमार मिश्र
काठमाडौँ — जाडोको याममा डिप्रेसन हुनु, एक मानसिक समस्याको रुपमा देखिन्छ । डिप्रेसन हुनुमा यसका अनेकौँ कारणहरु हुन सक्छन् ।
यदि तपाईँ जाडोयाममा वा अन्य मौसमको अपेक्षा आलस्य, थकानका साथै उदासीपन महशुश गर्नुहुन्छ भने तपाई सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डर को समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ । जाडोको मौसममा प्राय;गरी दिउँसो सूर्यको प्रकाश (घाम) कमै पाईन्छ अर्थात् घामै लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो मस्तिष्कमा रहेको 'सेरोटोनिन' नामक रसायन तत्व प्रभावित हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो मुड विनाकारण त्यसै जति खेरपनि खराब नै रहन्छ । यसरी बराबर मुडआफ भइरहने अवस्थाले हामीलाई डिप्रेसनको सिकार बनाउन सक्छ ।
के हो सिजनल आफेक्टिभ डिसाडर्र ?
यस रोगको बारेमा चिकित्सा विज्ञानमा सर्वप्रथम सन्-१९८० को दशकबाट नै देखिन्छ । हालाकी यसभन्दा अगाडि पनि कयौँ चिकित्सक तथा बिरामीहरुमा यसको जानकारी थियो कि जाडोको सुरु हुने बितिक्कै व्याक्तिको स्वभावमा बदलाव देखिन सुरु भैहाल्थ्यो ।
सिजनल आफेक्टिव डिसाडर्रलाई विन्टर डिप्रेसन पनि भनिन्छ । विश्वमा यस्ता देशहरु पनि छन् जहाँ दिन लामो तथा घामको सर्वथा अभाव रहिरहन्छ । त्यस्ता मुलुकहरुमा विन्टर डिप्रेसनका रोगीहरु भेटिनु एक आम समस्या बनेको छ । जस्तै नर्वे,रसियाको नर्थपोल, डेनमार्क, फिनलेन्ड, ग्रिनलेन्ड, स्विडेनको भागमा जहाँ वर्षको ६ महिना रात र ६ महिना दिन रहन्छ । त्यहाँ विन्टर डिप्रेसनका समस्याबाट पीडित व्याक्तिहरु बढी भेटिन्छन् । यही कारण होला कि त्यहाँका मानिसहरुमा आत्महत्या गर्नेको संख्या सबैभन्दा बढि देखिन्छ।
लगातार थकान महशुस हुनुका साथै दैनिक काममा मन नलाग्नु, नकारात्मक विचारहरु बारम्बार आइरहनु, निन्द्रा नलाग्नु या अत्यधिक निन्द्रा लाग्नु,कार्बोहाइड्रेडयुक्त चिजहरु खान मन लाग्नु जस्तै- रोटी, ब्रेड, पास्ता, पिज्जा आदि, शरीरको तौल तीव्र गतिले बढ्नु ।
दिनचर्या निर्धारित गर्ने,प्रत्येक दिन योग अभ्यास, ध्यान र व्यायाम गर्ने,खाना थोरै तर दिनको ३/४ पटक खाने, हरियोसागपात, फलफुलको जुस, माछा बढी मात्रामा खाने,बिहान अबेर सम्म नसुत्ने,दिउँसोको खाना((लन्च) सम्भव भए घाम मा बसेर खाने,बिदाको दिनलाई आनन्दमय बनाउनाउन खोजे यो रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
यो रोगबाट प्रभावित व्याक्तिहरुको उपचार लाईट थेरापी अन्तर्गत २ प्रकारले गरिन्छ;ब्राईट लाईट ट्रिटेमेन्ट र दोश्रो डानसिभुलेसन ।
ब्राइट लाईट ऊपचार अन्तर्गत रोगीलाई लाईट बक्सको अगाडि प्रत्येकदिन बिहान- आधा घन्टासम्म वस्न लगाइन्छ भने डानसिभुलेसनमा बिहान सुतैको बेलामा रोगी छेउमा मन्द प्रकाश जिउमा लगाईन्छ, जुन पछि विस्तारै प्रकाश तेज हुँदै जान्छ। अर्थात् सुर्योदय जस्तै कृत्रिम वातावरण तयार पारिन्छ।
यस बाहेक डिप्रेसन हटाउने औषधी मनोचिकित्सकको सल्लाहमा दिईन्छ । यदि बिरामी उग्ररुपमा छैन सामान्य अवस्थामा छ भने बिरामीलाई मनोपरामर्श अन्तर्गत कग्निटिभ बिहाभेरियल थेरापी विधिको प्रयोग गरी उपचार गरिन्छ ।
यसको उपचारको लागि केहि आसनहरु छन् । जसको नियमित अभ्यासले निकै फाइदा पुर्याउनुका साथै यस समस्याबाट बाहिर ल्याउन केहि हद्दसम्म सहयोग गर्दछ । ती आसनहमा मेडिटेशन, प्राणायाम, अनुलोमबिलोम, कपालभाति, भ्रामरी आदि । यि आसनहरु कुनै योग गुरुको सानिध्यमा बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस विधिमा रोगीको मानसिक एवं शारीरिक लक्षणलाई मध्यनजरमा राखेर समष्टिगत रुपमा रोगीको अध्यनगरी उपचार गर्ने गरिन्छ ।
प्रायःगरी सिजनल अफेक्टिभ डिसअर्डरका रोगीहरुमा परीक्षणको समय देखापर्ने मानसिक लक्षणहरुमा उदासीपन,निरास हुनु, हतास हुनु, जिन्दगी बेकार हो जस्तो लाग्ने, एकलै बस्न चाहने, साथी मन नपर्ने, संगित सुन्दा रमाइलो लाग्ने, कुनै वस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, आत्महत्या गर्ने बारे मनमा विचार आउने, गुलियो खाने ईच्छा हुनेहरु हुन् ।
जाडोको मोसममा हुने विन्टर डिप्रेसनको रोगोपचारमा प्रयोग गरीने मुख्य होमियोप्याथिक औषधिहरु निम्नलिखीत छनः
आरममेटालिकम, रसटक्स, फासफोरस, सिपिया, इग्नेशिया आदि । यी औषधीहरुको प्रयोग आफ्नो नजिकको कुनै योग्य तथा अनुभवि होमियोप्यथिक चिकित्सकको सल्लाह लिइ गरेमा अत्यन्त लाभदायक हुनेछ ।
Mishradr.lk@gmail.com प्रकाशित : मंसिर २३, २०७५ १९:१३
कार्तिक १५, २०७५ डा. ललित कुमार मिश्र
काठमाडौँ — बदलिदो मौसमले आफुसंगै धेरै रोगहरु पनि साथै लिएर आउछ । तर, धन्दा मान्नु पर्दैन । केहि साबधानी अपनाईयो भने जाडोयामकाका कारण हुने धेरै रोगबाट आफुलाई बचाउन सकिन्छ ।
जाडोयाममा धेरै जसो देखिने स्वास्थ्य समस्याहरुमा यस प्रकार छन् :
रुघाखोकी र ज्वरो : यो समस्या ऋतु परिवर्तनको बेला प्रय जसोमा देखिन्छ । शरीरको प्रतिरोधक क्षमता जसको कमजोर छ, त्यस्तालाई चाँडै यस्ता मौसमी रोगले भेट्छ । संक्रमणबाट हुने रोगको भाइरसबाट बच्न सरसफाईमा बिषेश ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । बराबर साबुन पानीले हातधुनु पर्छ । यो भाइरल ईनफेकस्न हो । यस अवस्थामा बिरामीलाई संक्रमणबाट चाँडै निको पार्न एन्टी एलर्जिक होमियोपैथिक औषधि लक्षणअनुसार दिईन्छ । यसको अलावा वाफ लिने, नुन पानीले कुल्ला गर्नले पनि लाभदायक हुन्छ । संक्रमण भएको अवस्थामा तातो झोलीय तरल पदार्थ बढि मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ । चिसो पानी पिउनु हुँदैन । तुरन्त गर्मबाट चिसोमा, चिसोबाट गर्मीमा जानु हुँदैन । बाईक वा स्कुटर चलाउने बेलामा नाक, मुख छोप्ने गरी हेलमेट लगाउनुपर्छ । कोल्ड ड्रिक्स, आईसक्रिम खानु हुँदैन । यस मौसममा केटा-केटी, बुढापाकाहरुको बिशेष ख्याल राख्नु पर्दछ ।
टाँन्सिलाइटिस् : केटा-केटीहरुमा यो समस्या आमरुपमा देखिन्छ । यो बेक्टेरियल या भाइरस संक्रमणबाट हुन्छ । यो समस्या भएमा गलामा दर्द हुनु, खाना खान, बोल्नमा अप्ठ्यारो हुनुका साथै ज्वरो पनि आउन सक्छ । यसबाट बच्नको लागि यस मौसममा चिसो पेय पदार्थ तथा चिसो खाने कुराको सेवन गर्नु हुँदैन ।
आस्थामा : दम एक किसिमको एलर्जिक रोग हो । दमबाट पीडित बिरामीहरुको समस्या जाडोको मौसममा बढ्न सक्छ । रातको समयमा, चिसो बढेको बेला तथा जाडोको मौसममा एलर्जिएटेक हुने संभावना बढि हुन्छ । अत: दमका रोगीहरुले एलर्जिक तत्व तथा चिसो हावाबाट बच्ने । धुलो, माटो, धुवाँ र बायु प्रदुषणबाट बच्न एकदमै जरुरी हुन्छ । दमका रोगीले आफ्नो नियमित सेवन गर्ने औषधिहरु आफ्नो साथै राख्ने । चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम लिई राख्ने । आफुखुशी औषधि बीचमा छोड्नु हुदैन ।
जोर्नीको दुखाई : उमेर खाई सकेका बुढा बुढीहरुमा बदलिंदो मौसममा हात खुट्टाका जोर्नीहरु दुख्ने समस्या बढि देखिन्छ । चिसो बढेको बेला ज्वाईन्ट पेन जसलाई पनि हुन सक्छ । तर बुढ बुढीहरुको हड्डी कमजोर भएको कारण यिनीहरुलाई चिसोले बढि प्रभावित गर्दछ । अर्थराईटिस्, सानो जोर्नीहरुमा दर्द, घुँडाको दर्द बडो असहनीय हुन्छ । यसबाट बच्नको लागि सकेसम्म चिसो हावामा बाहिर ननिस्कने । जोर्नीहरुमा तातो सेकाईको लागि पट्टी या हट ब्यागको प्रयोग गर्ने । सामान्य हल्का किसिमको ब्यायाम नियमित रुपले गर्ने । होमियोपेथिक औषधिको साथ-साथै योग तथा फिजियोथिरापीले पनि जोर्नीको दुखाईबाट आराम मिल्दछ । साथै नियमित रुपबाट औषधिको सेवन गरिराख्ने तथा आफ्नो चिकित्सकसँग बेला बेलामा सम्पर्क गरी स्वास्थ्य परिक्षण गराई रहने ।
मच्छरबाट फेलिने रोग : यस मौसममा मच्छरको टोकाईबाट हुने रोगहरु जस्तै, डेंगु, मलेरिया, चिकनगुनिया आदिका रोगीहरु पनि देखिन्छन् । यदि शुरुमै यो रोग पता लाग्यो भने बेलैमा उपचार गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । डेंगु वा चिकिनगुनिया वाइरसबाट हुने यो रोगमा ज्वरो आउनुको साथै ज्वाइन्टस् पेन, मांशपेशिहरु दुख्ने, शरीरमा रातो–रातो डाबर देखिन सक्छ । यसको अलावा पेट खराब हुनु, कमजोरी महशुस हुनु, रिंगटा लाग्नु, वान्ता हुनु, पातलो दिशा हुनु यसका लक्षणहरु हुन् । मलेरिया ज्वरो साँझ पख या रातितिर बढ्ने हुन्छ । यस रोगमा ज्वरोको साथै काम्ने जाडो पनि हुन्छ ।
यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसंग परामर्श गरी उपचार गराउने । रोगलाई बढ्न नदिने बेलामै उपचार गराउने, बच्नका लागि घरको वरिपरि पानी जम्न नदिने, लामखुट्टे मार्ने औषधिको प्रयोग गर्ने, पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउने तथा मच्छरदानीको प्रयोग गर्ने गर्नु पर्दछ । यसका साथै मच्छर भगाउने क्वाइल या गुडनाईट बाल्ने, बदलिंदो मौसममा हुने रोगबाट बच्नका लागि सर-सफाइका साथै खान-पान तथा पानीमा बिषेश ध्यान दिने । झोलीय पदार्थ जस्तै, दालको सुप, ग्रिन टी, तुल्सी चिया, अदुबा हालेको चिया, लेमन टी, हट लेमेन आदि सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ । यि रोगहरुको अलावा जाडो याममा बातावरणको चिसोपन र चिसो हावाले छालालाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्दछ र छाला सम्बन्धी पनि समस्याहरु देखिन्छन्, जस्तै, चाया पर्ने । यसको निधानका लागि बिभिन्न औषधीयुक्त स्याम्पु उपलब्ध छन् । अवस्था अनुसार औषधियुक्त स्याम्पु प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसैगरी चिसोमा रक्त सञ्चारको प्रवाह कम हुनाले छाला खुम्चिन्छ र च्याउरी परेको सुख्खा र फुटेको जस्तो देखिन्छ । जस्तै, हात खुट्टा फुट्ने । सामान्य हात खुट्टालाई साबुन पानीले धोएपछि औषधियुक्त क्रिमहरु प्रयोग गर्नु पर्दछ । जस्तै, भ्यासेलिन, एलोबेरा आदि । सुतिको मौजा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । भुई वा सिमेन्टमा नाङ्गै खुट्टाले हिडनु हुदैन ।
ओठ फुट्ने : जाडोमा ओठ बढि फुट्नुको कारण जिब्रोले ओठलाई ओसिलो बनाउन खोज्नले पनि हो । यसको लागि बानी नै सुधार्नु आवश्यक हुन्छ । ओठको लागि एलोभेरायुक्त मलहम तथा लिपगार्डहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ । जाडो महिनामा साबुनको प्रयोग गर्दा म्वाईस्चराईजिङ साबुनहरु । जस्तै, डोभ, पियर आदिको प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्ता साबुनले छालालाई मुलायम राख्न मद्दत गर्दछ । पानी प्रशस्त खानु पर्छ । हरियो सागपात, सिजनल फलफुल, आईरन र जिकंयुक्त खाने कुराहरु जस्तै, केरा, माछा, मासुको सेवनले छालालाई स्वास्थ राखि म्वास्चर र पानी कम हुन दिंदैन र छालालाई सुख्खापनबाट बचाउँछ ।
यस मौसममा देखिने स्वास्थ्य समस्याहरुमा रोगी तथा रोगको अवस्था अनुसार प्रयोग हुने केहि होमियोप्याथिक औषधिहरु निम्न लिखित छन् :
१) रुघाँखोकी र ज्वरोमा लक्षण अनुसार प्रयोग हुने : एकोनाइट, रसटक्स, ब्रायोनिया, डल्कामारा, फेरम फाँस, जल्समियम आदि ।
२) टान्सिलाईटिसमा प्रयोग हुने : बेलाडोना, बराईटाकार्ब, फाईटोलेक्का आदि ।
३) जोर्नीको दुखाइमा प्रयोग हुने : एकोनाईट, रसटक्स, ब्रायोनिया, कस्टिकम आदि ।
४) आस्थमामा प्रयोग हुने : एकोनाई, आर्सेनिक, पल्साटिला, नेट्रम सल्फ आदि ।
५) कपालमा चाया पर्दा प्रयोग हुने : कल्केरिया सल्फ र थुजा ।
६) ओठ तथा हातखुट्टा फुटेमा प्रयोग हुने : पेट्रोलियम, ब्रयोनिया, नेट्रम–म्युर, सल्फर आदि ।
औषधिहरुहरु नजिकको चिकित्सको सल्लाहमा प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७५ १६:३२